Thomas Tuchel Oo Ka Xanaaqsan Kana Hadlay 'isbeddelka Habdhaqanka Ee Xidigaha Chelsea
HomeWararka CiyaarahaThomas Tuchel oo ka xanaaqsan kana Hadlay ‘isbeddelka habdhaqanka ee Xidigaha Chelsea
Thomas Tuchel oo ka xanaaqsan kana Hadlay ‘isbeddelka habdhaqanka ee Xidigaha Chelsea
December 9, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Horyaalka Ingiriiska 0
Tababare Thomas Tuchel ayaa ku dhaleeceeyay kooxdiisa Chelsea in ay ku guuldaraysteen in ay ilaashadaan shabaqooda marka ay hogaanka u hayaan kulamada.
Inkastoo 1-0 iyo 3-2 ay ku hogaamiyeen kulankii Zenit St Petersburg xalay, Blues ayaa ugu dambeyntii laga barbareeyay goolasha.
Dib u dhacan ayaa ahaa dhacdadii ugu dambeysay ee kooxda Premier League ka dhisan ay ku guuldareysatay inay goolasha sii haysato, markii hore waxay timid sabtidii markaasoo ay labo jeer hogaanka ku hayeen West Ham United ka hor inta aysan guuldaro 3-2 ah kala kulmin kooxda ay xafiiltamaan ee London.
Tuchel waxa uu dareensan yahay in isbeddel lagu sameeyay maskaxda ciyaartoydiisa, wax uu doonayo in uu tirtiro ciyaaraha soo socda.
Isagoo la hadlayay saxafiyiinta, Tuchel wuxuu yiri: “Falanqeynteyda aad bay u caddahay: dabeecadeenu waxay isbedeshaa marka aan hogaanka heyno, tani waa wax aanan waligeen sameynin mana aha inaan waligeen sameyno.
Goolkii barbaraha ee Zenit ayaa la micno ah in Chelsea ay ku dhameysatay kaalinta koowaad ee group-keeda Juventus, taasoo meesha ka saartay suurta galnimada inay ku kulmaan Bayern Munich ama Real Madrid wareega 16ka